5 Kuhle Ukudoba Izindawo EYurophu Ukuze Jabulela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Ukudoba Izindawo EYurophu Ukuze Jabulela
Akunalutho into efana ngokudoba okokuqala endaweni entsha. Ngoba noma yisiphi Angler, ukuthi sifisa noma egcwele nakho, ukudoba umsebenzi eziyigugu ebasiza uphumule. Yini kungaba olungcono ngabo kunokuba ezokuvakasha ngokuhlanganisa futhi ziyinto abawuthandayo?
Ngenhlanhla kulabo ukujabulela ukudoba, bangu izindawo ezinhle e-Europe leso sici ezihlukahlukene izinhlanzi. Uma ungumuntu uhlela ukwenza uhambo lwakho konke mayelana nokudoba, sikwazi ukukusiza banqume ukuthi bayaphi. Ake bheka uhlu lwethu 5 best ukudoba Izindawo e-Europe ukujabulela:
1. Ukudoba Izindawo ESweden
Uma ufuna sithiye Sweden, akufanele abheke phambili kakhulu kunalokho Stockholm ezindaweni ezinhle ukudoba. Ngokwesibonelo, Stromgatan ilungile phakathi edolobheni, futhi has a umbono omkhulu. Ungabheka phezu Swedish isakhiwo ephalamende bese I Old Town ngenkathi ukudoba. Enye indawo saleli Hammarby Sjostad phezu Hammarby echibini, endaweni ethandwa e Stockholm. It has amaningi izindawo ezinhle ukudoba futhi kalula ukusuka edolobheni.
Nokho, uma ufuna yakudala ngaphezulu Indaba yokudoba nemvelo, ngeke neze ube ukushayela kude Stockholm. Ringsjon Lake unikeza ezinye izindawo zokudoba enhle lapho ungakwazi ukubamba whitefish kanye rainbow trout. Drevviken kungenye echibini ethule eduze Stockholm, efana Ringsjön. Okuhle kakhulu futhi esimeme indawo yokudoba, Drevviken Lake ngeke ukuphoxe.
Ungase amabombo kuleli qoqo leziqhingi Stockholm futhi isiqhingi Galo, okuyinto ipharadesi langempela elingalodwa. Ungakwazi ekamu nenhlanzi lapho okuqukethwe yinhliziyo yakho, ujabulela imvelo kuleli qoqo leziqhingi sika.
2. Ukudoba Izindawo EFrance
France iyizwe elihle ngomsebenzi nganoma yiluphi nje, ngakho-ke asikho ukudoba wonder eFrance futhi omkhulu. Omunye evelele kunazo zonke izindawo ukudoba Lac du Bourget, echibini France ejulile ngobukhulu. Kuba indawo umxhwele ngoba livalela phezu 30 kwezinhlobo zezinhlanzi. Phakathi kwazo, ithrawuthi, Zander, Pike, futhi perch ivelele. Leli chibi ngempela igugu we Rhône-Alps esifundeni.
Khona-ke kukhona Bassin d'Arcachon eningizimu-ntshonalanga coast waseFrance - kulabo ukujabulela ukudoba ezihlala emanzini anosawoti. nokushona Beautiful, amanzi acwebezelayo, nama-sea bass kungezinye zezinto ongazilindela e-Arcachon.
Anglers nothando phesheya Lake Der-Chantecoq, enkabeni ye Champagne esifundeni, kuqhathaniswa eduze Paris. Kuyinto enkulu indawo yabaqalayo, nakuba izinzuzo ubudala abavamisile echibini ngenxa carp giant. Ezinye izindawo esiphawulekayo French zihlanganisa La Rance River futhi Alder. Bobabili ezidume ngokuthi izindawo omkhulu ukuthatha yakho umndeni ku uhambo ukudoba.
3. Ukudoba Izindawo E-Italy
Lapho e-Italy, ungase kanye funa ezinye best ukudoba ezindaweni eYurophu. Esifundeni Le Marche inikeza abanye ukudoba okukhulu, ikakhulukazi Cingoli, Pioraco, futhi Sefro. Ubathola ezinye namachibi amahle kakhulu Italian ukudoba, equkethe trout, Pike, futhi carp, phakathi nezinye izinhlobo. Nokho, uma kuziwa amachibi, kukhona futhi Lake Como wenyukela enyakatho, nge Pike yayo futhi perch.
Ake Ungakhohlwa mayelana emfuleni enkulu Italian, the Po. Iyisonto eyikati giant futhi carps enkulu ukuthi ngabe ukuyenga yimuphi Angler. Ngo Tuscany, imifula ayizindawo ukudoba evelele kunazo zonke. Lima ngesihlungo yizindawo ezinkulu ngabadobi trout futhi Grayling.
Kulabo Anglers abakhetha bedoba emanzini evulekile, kukhona izindawo ezimbili ezinkulu ukudoba e-Italy. I Egadi Islands yeSisili ugu lweNyakatho Sardinia thina lihle nge ngobuhle bayo nangezithelo zayo izinga lokudoba zinikeza. Bheka i-tuna blue-fin ne-swordfish Sicilia eMedithera, futhi inhlaka Jack, snapper, futhi Garrick oLwandle Tyrrhenian.
4. Ukudoba Izindawo Ngo-UK
I i-United Kingdom iyindawo emangalisa, ukunikela abanye izindawo ezinhle okudoba ubuhle engonakalisiwe zasendle eziqhingini. Uma ufuna i-catch emangalisayo, UK ingase ibe indawo ekufanele. Kodwa sasingazi ukuthi yiyiphi indawo kufanele ukhethe?
Enye yezindawo ezigqame kakhulu eDartmoor, Devon. Nge igama evocative ezifana, awukwazi behluleka ukukubona ngeso lengqondo konke okuhlangenwe nakho ukudoba izinhlanzi elambile ekusakazeni amnyama. I Tyne emfuleni e Northumberland has a umbala ekunika inzuzo abahlukene kumelene nolwandle trout eziphilayo lapho. Lokho kwenza lokhu ephelele emfuleni ukudoba emini kanye ezinkulu ulwandle trout catch.
River Clettwr eduze komngcele we England naseWales kuzoba endaweni ezikhangayo kakhulu bamazwe. Bheka akukho okunye uma ufuna ukusebenza kanzima ukuze catch yakho e namanzi anolaka. Isimo kancane kufinyeleleke kalula ngesikhathi Strangford Lough, County Down. Kuyinto ulwandle Loch ngobukhulu UK eziswebezelayo eziswebezela mackerel, Pollock, futhi haddock, phakathi kwabanye.
Assynt ingase ibe indawo iyesabeka kunazo zonke - izungezwe ngaphansi enkulu izintaba, kokubili ongakhetha engxubeni yamanzi anosawoti nasemanzini agelezayo ukudoba. Fionn Loch liyindawo enkulu ngabadobi bomdabu trout esinsundu.
5. Ukudoba Izindawo EJalimane
Germany ngempela ukuba indawo yayo phezu uhlu the best ukudoba ezindaweni eYurophu. Njengoba bebaningi kangaka nemifula emikhulu nasemachibini, bekungaba isimangaliso uma akazange enze uhlu. Ezinye izindawo ezithandwa kakhulu ngoba ngokudoba e Germany kufanele zihlanganisa iDanube endaweni. Esikhathini 8 angu eside endaweni Bavaria iDanube, ungakwazi ukubamba ukwehluka enkulukazi izinhlanzi.
Ukudoba umfula ngaphezulu, Rhine futhi Elbe, abathanda ikakhulukazi Baden-Württemberg futhi Saxony-Anhalt, ngokulandelana, isipiliyoni Kuyamangaza. Nokho, uma uthanda ukudoba echibini, kukhona njalo echibini Chiemsee neLake Starnberg. Bobabili ijulile ngempela, inala Pike, ithrawuthi, futhi bream.
Ukuze zonke Anglers nge ukulunywa uuku ngcebeleka, zikhona izindlela ukuhlanganisa Uthando lwabo ezimbili ezinkulu. Europe inikeza inala izindawo ukwenza catch omkhulu futhi ujabulele uhlobo namadolobha ophithizelayo ngokufanayo.
Uma ufuna ukuzwa noma ukubona ezinye ukudoba okukhulu, kukhona inala kufinyeleleke kalula 5 best ukudoba ezindaweni eYurophu ukujabulela. Uma usukulungele hit amanzi, ukubhuka amathikithi akho isitimela manje futhi ungabheki emuva!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle Ukudoba Izindawo e-Europe Ukuze Jabulela” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ukudoba #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips